တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအား ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့်ကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
ထို့နောက် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောကြားရာတွင် ရခိုင် ပြည်နယ်မြောက်ခြမ်းတွင် လက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေသည့်ပဋိပက္ခမှာ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီကပင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရောက်ရှိနေထိုင်ခဲ့ သည့် ဘင်္ဂါလီများက စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုလိုနီခေတ်တွင် နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့က ဘင်္ဂလားနယ်မှ လူများကို ခေါ်ယူခဲ့ရာမှ တဖြည်းဖြည်းလူဦးရေတိုးပွားလာကြောင်း၊ ရှေးယခင်က ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော ဒေသတွင် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများက လူများစုဖြစ်ပြီး ဘင်္ဂါလီများက လူနည်းစုဖြစ်ကြောင်း၊ ၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများကို တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ် မောင်းထုတ်ပြီး ယင်းဒေသ၌ တဖြည်းဖြည်း ဘင်္ဂါလီလူဦးရေ တိုးပွားလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုဆိုလျှင် ဘင်္ဂါလီကအများစုဖြစ်ပြီး ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများက လူနည်းစုဖြစ် ကြောင်း၊ ပြီးခဲ့သည့်သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ဖြစ်စဉ်တွင် ရဲကင်းစခန်း ၃၀ ခုနှင့်တပ်ဌာနချုပ်တစ်ခု တို့အား ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက် သမား အင်အား ၄၀၀၀ ခန့်ကဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း၊ ရဲစခန်းအများစုမှာ စခန်းတစ်ခုလျှင် အင်အား ၁၀ ဦးမှ ၂၀ ဦးအထိသာ ရှိကြပြီး စခန်းအချို့သာလူအင်အားအနည်းငယ်ပိုရှိနိုင်သော်လည်း ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများက ရဲစခန်းတစ်ခုလျှင် လူအင်အား ၂၀၀၊ ၃၀၀ မှ ၅၀၀ ဝန်းကျင်ခန့်ဖြင့် ဝိုင်းဝန်း တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြကြောင်း၊ အကယ်၍ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်လက်နက်များဖြင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပါက ယခုထက်ပို၍ အကြမ်းဖက်သူများစွာ သေဆုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုပြဿနာသည် ဘာသာရေးအရဖြစ်ပွားသည့် ပဋိပက္ခမဟုတ်ဘဲ မိမိတို့နိုင်ငံအတွင်း ရောက်ရှိနေထိုင်သူများက နိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်မှုကို လက်မခံသောကြောင့် လှုံ့ဆော်မှုများပြုလုပ်ရာမှ ဖြစ်ပွားလာ ခြင်းသာဖြစ် ကြောင်း၊ ယင်းဘင်္ဂါလီများ ထွက်ပြေးမှု နှင့်ပတ်သက်၍လည်း ၎င်းတို့အနေဖြင့် လူနည်းစုဖြစ်သည့် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ၊ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များကို ရက်စက်စွာအကြောင်းမဲ့ သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ်မလုံခြင်းကြောင့် ၎င်းတို့အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရမှု ရှိသည်ဟုယူဆ ရသည့် မျိုးနွယ်တူသူများထံသို့ သွား ရောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ အဆိုပါကိစ္စအား နိုင်ငံတော်အစိုးရက ဥပဒေနှင့်အညီသာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင် မည် ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ဗီယက္နမ္ဆိုရွယ္လစ္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအား ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ျဖင့္ႀကိဳဆို၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တုိင္းျပည္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္လုံၿခဳံမႈအတြက္ မျဖစ္မေန အကာအကြယ္ ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လည္း သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ က်င့္ဝတ္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ဗီယက္နမ္ဆိုရွယ္လစ္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး H.E. General Ngo Xuan Lich ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဇယ်ာသီရိဗိမာန္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ေတြ႕ဆုံစဥ္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး H.E. General Ngo Xuan Lich အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန်၌ ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့် ကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး